Jijiga oo Lagu Qabtay Xus Afar Jira, oo Loogu Yeedhay Maalinta Cadaalada Degaanka! – Rasaasa News
Jijiga oo Lagu Qabtay Xus Afar Jira, oo Loogu Yeedhay Maalinta Cadaalada Degaanka!
Jijiga, Apr 10, 2014 – Maalinta cadaalada degaanka oo ah, maalin aan hore loo maqal, ayaa waxaa laga xusay Jijiga in ay tahay sanad guuradii 4aad, ee laga xuso degaanka Somalida Atobiya.
Ana waxaa ila mudnaatay maanta in aan la makeekamo magalootiyada ay madax martay micnaha cadaaladu.
Xuska 4aad ee sanad guurada cadaaladda degaanka Somalida ee la sheegay, waxaa ka soo qayb galay madaxwayne ku xigeenka, hogaanka nabadgaliyada iyo hogaanka cadaalada Cabdulahi Yusuf Weerar.
Xuska maalinta cadaalada waxaa kale oo ka soo qaybgalay madax xafiiseedyada iyo shaqaalaha dawlada, kuwaas oo ka soo kicitimay xarunta maamulka isuguna soo ururay Aqalka shirarka iyo heesaha ee loogu magac daray halgamaagii Somaliyeed ee Sayyid Maxamed Cabdille Xasan.
Madaxwayne ku xigeenka, hogaanka nabadgaliyada iyo hogaanka cadaalada ayaa la hadlay Aqalka dadkii isugu yimid. Cabdulahi Weerar oo la hadlayey shaqaalaha dawlada , wuxuu ku cel celyey in la gaadhay horumar. Cabdulahi Weerar, ma faahfaahin horumarka uu sheegay in la gaadhay, waxaa kale oo uusan ka hadal maalinta cadaalada ee xuska loo samaynayey. Malahaydga Cabdulahi Weerar, wuxuu u qaatay in cadaalada la sheegiba ay tahay xadhiga iyo ka adkaanshaha shacabka. Shakina kuma jiro in Cabdulaahi Weerar iyo inta la midka ah in dadka Jijiga joogaa aad uga cabsaadaan.
Cabdulahi Yuusuf Weerar, wuxuu ka mid ahaa ragii lagu bilaabay LB, wuxuuna isku haya saddex jago oo aan is qaadan karin oo kala ah jagada madaxwayne ku xigeen, jagada hogaanka cadaaladda iyo jagada hogaanka nabadgaliyada. Labada jago ee hogaanka cadaalada iyo hogaanka nabadgaliyada oo ah jagada ugu dhibaatada badan shacabka degaanka, waxaa soo hayn jiray madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar. Cabdulaahi da,a ahaan waa tiro ka hoosaysay Afartan, aqoon iyo waayo aragnimana waa Liyuu Boolis, hadaba sidee bay ku dhaci kartaa hanashada saddexdan jago?
Jagada madaxwayne ku xigeen waxay mudan tahay in ay marto mansabkeeda, fulisana halmaalmeedka guud ee degaanka, go,aan qaadashada arimaha degaanka iyo meel marinta arimaha bulshada si nadiif ah.
Jagada hogaan Nabadgaliyo waa xirfada loo tabobaray Cabdulahi Weerar, taas oo ah ilaalinta nabadgaliyada, waxayna la xidhiidhaa shaqo ciidan oo ciqaab iyo xadhig leh, maadaama ay sugayso nafta iyo maalka dadka. Shakina kuma jiro in ay gali hayadaasi khladaad badan, oo cabashadiisa ay xaliso Cadaaladu.
Xafiiska Cadaaladu waa xirfada u baahan aqoon la xidhiidha barashada sharciga iyo garsoorka dadka waana shaqo rayad, taas ilaalisa u sinaaanta sharciga xukuntana dunuunbta baadhid lagu cadeeyey. Cadaaladaas oo ruux waliba u baahan yahay si ay nabadgaliyadu u sugnaato. Hadii ayna cadaaladi jirin way adagtahay in nabadgaliyada xoog lagu sugo, ruuxa dulman wuxuu isku dayi in uu dulmiga iska difaaco, taas oo keenta in dambi dhaco.
Marna waxaan suurto gal ahayn aduunka ka dhicin, in hal qof noqdo madaxwayne, ilaaliyaha nabadgaliyada, hadan uu sameeyo cadaalad. Arintaas waxay aduunyadu ku taqaan, kali talisyada talada xooga ku haysta, kuwaas oo wax kasta oo ay sheegaan aan laga dhagaysan.
Waxaa iswaydiin leh, kolka uu Cabdulahi Yusuf Weerar, oo xirafada uu haystaa ay tahay tababar Maleeshiyonimo [Liyuu Boolis], uu yahay madaxwayne ku xigeen, hogaanka nabadgaliyada iyo hogaanka Cadaalada, waxaa iswaydiin leh dalka miyeyna joogin dad kale oo shaqada la qaybsada. Mise shaqada degaanka taal ayaa ah Geela Geelaysi iyo shanood mushaar lagu qaato, oo Atoobiya shacabka loogu ciqaabo.
Waxaan goobjoog ka haaa oo aan la iiga sheegaynayn, in maalin maalmaha ka mid ah maxkamad lagu sheego maxkamada sare ee degaanka in la keenay rag dhawr ah oo lagu eedeeyey in ay maamulka dacaayadeeyeen. Ragaas oo aan hubo in ayna wax dambi ah lahayn af kahadal mooyee ayaa lagu kuxukay shan sano . Kolka uu go,aankii dhacay ayaa waxaa garsoorihii la soo hadlay Cabdulahi Yuusuf Weerar oo yidhi isug, kolkii uu maxkamadii soo galay Weerar, wuxuu si cod kor ah u yidhi imisaad ku xukuntay nimankan, kolkaas ayuu garsoorihii yidhi mudane 5 sano ayaan ku xukumay. Cabdulahi Yusuf Weerar wuxuu cod kore ku yidhi, ka noqo oo 20 sano ka dhig xukunka, kolkaas ayuu Garsoorihii yidhi Haye mudane. Ragii maxaabuuska ahaa midkood ah ayaa ku yidhi cimrigaa ha ku furto ka dhig xadhiga waad isku yaraysaye, haweenkii meesha fadhiyey oo ay ka mid ahaayeen xaasaska raga la xukumay ayaa Oohin afka furtay, kolkaas ayuu Weerar ku yidhi Xukun iyagana.
Maalin cadaaladda oo afar jirsatay baa degaanka laga xusay, waxay la mid tahay degaanka Somalidu wuu xoroobay, oo ah sida ay mar mar u yidhaahdaan Reer Miyiga Qurbaha Tagay.
Iska dhaaf in ay dhagaystaan dadka degaanka u dhashay cadaalada baa degaanka laga xusay, waxaa taas diidan aduunka aan aragba Ogadeeniya. Kuwaas oo dadkooda uga diga in ayna tagin degaanka Somalida [Ogaden], marka laga reebo Magaalada Jijiga. Waxaa kale oo aan tagi karin hal wariye oo Ajnabi ah iyo ruux si madaxbanaan uga socda hayadaha caalamiga. Cadaalada uu in Weerar celceliyey waa cabsida isaga laga kala cararo kolka uu suuqa Jijiga soo galo.
Britain fundsfunds human rights abusers in Ethiopia